Yini i-ROE? o Buyisela Kwezakho Izinsiza | Ezezimali Zomnotho
ROENgeSpanish: Buyela ku-Equity, ethola isifinyezo sesiNgisi, "Buyisela Emalini " Isebenza njengenye yamathuluzi amakhulu asetshenziselwa ukuhlaziywa kwezomnotho kwenzuzo inkampani enayo.
2 Ungayibala kanjani i-ROE?
3 Izicelo ezahlukahlukene ze-ROE
5 Ifomula ye-Dupont
5.1 Nazi izingxenye ezinhlanu ze-ROE ngokusho kwefomula yeDupont
6 Singagcina ngokuthi i-ROE
I-ROE yipharamitha enomsebenzi wayo ukuqopha ukusebenza etholwe ngumninimasheya nge inhlonipho kwizimali onazo kuhlanekezelwe emphakathini othize. Ngalokhu ngisho ukuthi i-ROE ilinganisa izindlela ze- kungenzeka amandla ukuthi le nkampani okukhulunywa ngayo, kufanele khokha ngokwezomnotho ukuze abaninimasheya ukuthi bayabambisana kulokhu.
Abaninimasheya bangakwazi hlaziya Ngokusebenzisa le pharamitha, i- ukusebenza i-del capital abasebenzise ekutshalweni kwemali futhi, ngale ndlela, hlola la ukusebenza ukugcina imali yakho kulokho kubambisana noma ukuthatha umhlalaphansi ngaphambi kokuba umkhumbi ucwile.
Ungayibala kanjani i-ROE?
Buyisa ngokulingana noma ROE, ihambelana ngqo nephesenti elitholwe ngokuhlukanisa i- inzuzo ephelele ngemuva kwentela phakathi Los izimali zakho.
Inzuzo ephelele ngemuva kwentela
Le fomula ingaqondakala futhi njenge- ukukala yokuthi inkampani ethile ifaka kanjani imali ethile ukuze ikwazi ukwenza imali efanelekile.
El ROE Inezicelo emikhakheni eminingi, zonke izinkampani ezinkulu ziyayisebenzisa futhi isebenza kahle kakhulu ukuqinisekisa ukuthi kukhona inzuzo ephelele ngemuva kokutshala imali kuphrojekthi ethile.
Bangakwazi ithonya izinto eziningi ngesikhathi se- ukubala ngokwanele le nzuzo, kepha izici zokubala eziyinhloko nezingenakunyakaziswa sezivele zibonisiwe kuwe, zisebenzise njengepharamitha engaphumeleli ukuqinisekisa ukuthi ikuphi lapho ungatshala khona okwamanje futhi kungenzeka.
Izicelo ezahlukahlukene ze-ROE
El ROE ingasetshenziswa kusuka ku- emuva imibono eyehlukene, leyo ye umtshalizimali, nokuthi i Empresa uzothola okufanayo.
I-ROE ngombono womtshali-zimali
El ROE Njengesilinganiso senzuzo, sesibe sesinye sezisetshenziselwa kakhulu ukuvela okufanele nezisebenza kahle kwezinkampani. Kwabaninimasheya kubaluleke kakhulu ukuthi i-ROE iphakeme kunokuthi kunenzuzo ephezulu ngokuphelele.
Kusukela ROE iyinkomba kakhulu ewusizo, yokuthi inkampani ekuyo tshala imali kuyinto ukuphatha y ikhiqiza inzuzo ngenhloko-dolobha enayo kubekiwe kuyo, ngakho-ke, iyi- ipharamitha kubaluleke kakhulu okuzodingeka ukuthi kubhekwe ngaphandle kokungabaza, uma ufuna ukutshala imali esikhathini esimaphakathi nesikhathi eside, ukunikeza ukulandelela y ukuqinisekiswa ekutshalweni kwakho.
Isizathu Oyinhloko lapho abaphathi bezezimali a Empresa basebenzisa i- ROE ukuthi conocer unjani kuyaqashwa Las izimali wabalingani nokuthi ungakhiqiza kanjani kangcono amaholo. Ngaphezu kwalokho, izinombolo ezinhle kule pharamitha, zibeka noma iyiphi inkampani esimweni evumayo ngaphambi kukaJehova imakethe yamazwe omhlaba, kusukela kokuningi phezulu kube yiwo ROE, iMeya Kuzoba yi inzuzo inkampani engaba nayo, kuya ngezinsizakusebenza zayo ezisetshenziselwe ukuxhasa ngezimali.
Lokho kusho ukuthi ROE ibeka inkampani ngohlobo lwe-world trust simo, lapho izinkampani ezinama-indices aphakeme kakhulu ROE, thola abatshalizimali abakhulu futhi bathengisele amasheya abo kuwo kangcono amanani usuku nosuku, ngakolunye uhlangothi uma le parameter incipha, i- ukuzethemba of the abatshalizimali, futhi kuyasibekelwa, ukuze izinkampani zabelane zehlise izindleko zazo, futhi abatshalizimali abakhokhe imali eningi ngabo, balahlekelwa yimali. Ngakho-ke kubalulekile ukugcina le nkomba njalo futhi isebenzise izinqubomgomo zomsebenzi ezihlelekile nezikhiqiza kakhulu.
I-SWR nayo isetshenziswa kabanzi ukuqhathanisa i- inzuzo Phakathi kwezinkampani ezisemkhakheni ofanayo, kufanele kuqashelwe ukuthi ukuqhathanisa phakathi kwezinkampani ezisemikhakheni eyehlukene kungaholela emiphumeleni emibi, ngoba ukubuya kwemali eyinhloko yezomnotho kuhlala kuyehluka ngesikhathi nangendlela okuya ngayo ngomkhakha okuwo.
Ukwenza ukuhlaziywa okuyisisekelo kwenkampani, i- ROE ipharamitha engenakunganakwa, usizo lwayo luhlanganisa imikhakha eminingi kanye nochwepheshe, ukubaluleka kwe- ROE Akungabazeki njengamanje, ubukhona bayo bucace bha, esikhathini esizayo esiphumelelayo izinkampani eziningi zesimanje ezinazo ezikhule ngendlela emangalisayo eminyakeni embalwa, amacala afana ne-Facebook, YouTube, Snapchat, phakathi kokunye.
Lapho sibala I-ROE yenkampani enikeziwe, esikukala ngempela yikhono lomphakathi lokukhiqiza inzuzo kubaninimasheya.
I-ROE inikeza abaninimasheya ithuluzi lokuhlaziya inzuzo ukuthi bathole izimali abazitshalile, ngakho-ke bazohlola ngalo mphumela uma kuwukuhlakanipha ukuqhubeka nokutshala imali. Ukuze ucabangele ukuthi inkampani isebenza kahle, i-ROE kufanele yeqe inzuzo ephansi njengoba umninimasheya kudingeka ukuthi atshale imali ebhizinisini elithile.
Kuyasebenza futhi ukukala ukusebenza kahle komphakathi webhizinisi, okungukuthi, inani lenzuzo eliyinikezayo ngezinsizakusebenza ezitshaliwe. Isibonelo, inkampani ene-ROE yama-30%, ngakho-ke ithola ama-euro amasha angama-30 wenzuzo, kuwo wonke ama-euro ayi-100 atshaliwe.
Isetshenziselwa ukulandela ukuvela kwenkampani futhi, ngaphezu kwalokho, ivumela ukuqhathaniswa kwezibalo futhi ikhombisa ukuthi izinsiza zenkampani zisetshenziswa kanjani. Ukuphakama kwe-ROE, kuzokwandisa ngqo inzuzo inkampani engayinikeza, ngakho-ke, izokhanga kakhulu kunoma yimuphi umtshalizimali.
UDonaldson Brown Kungakho ngo-1912 uzibuze umbuzo okungenzeka uzibuza wona ngalesi sikhathi: Uma i-ROE yenkampani inyuka isuka ku-8% iye ku-12% ... kungani sekwenzekile lokho, ngoba inyuse inzuzo ngo-20% ukugcina inetha lifanele njalo?
Kungakho uDonaldson azimisele ngokuhlehlisa ifomula ibe ngama-quotients amahlanu ahlukene.
Nazi izingxenye ezinhlanu ze-ROE ngokusho kwefomula yeDupont
[NI / EBT]: Ubudlelwano obusungulwe phakathi kwenzuzo nenzuzo ngemuva kokungeza intela. Kuhlobene nesici sezimali.
[EBT / EBIT]: Ubudlelwano phakathi kwenzuzo ngaphambili de intela nenzuzo ngaphambili de izithakazelo. Kuhlobene nomthamo inkampani enayo yesikweletu, kanye nezintshisekelo ezikhokhwa yiyo.
[EBIT / Sales] Iphethe ukusungula ubudlelwano phakathi Las ukuthengisa futhi i umphumela de Las ukusebenza. Ukusungula amama enzuzo ebhizinisi.
[Ukuthengisa / Amafa] Ingabe i- inani lezikhathi zokuthengisa ezenze inani eliphelele lezimpahla. Okuhlobene nezinga lomsebenzi womphakathi inkampani enayo. Umqondo onzima ngokwengeziwe, kepha kube ukubuya kwemali eyinhloko, okungukuthi, lokho okutshalile kutholakale ngesikhathi esithile.
[Izimpahla / Ukulingana]. Ihlobene ngqo ne- inani lezikhathi lelo equity liqukethwe kuzimpahla. Kuhlobene nezinga lokukweleta kanye nokusizakala kwenkampani.
Ukucacisa ngokuqhubekayo, ake sibheke isibonelo sokucabanga. Ake sithi uJuan une- € 200.000. Ngalawo € 200.000 uthenga indawo eyiqashisa ngo- € 20.000 ngemuva kwentela. I-ROE kaJuan bese kuba ngu-10%.
UJuan ube esenquma ukungena ezikweletini nezinye izindlu ezimbili ukuze aziqashe ngentengo efanayo. Ngakho-ke, uzoba esikweletini sama-euro ayizi-400.000, okumele akhokhe kuwo inzalo engu-5%. Inzuzo ephelele izoba ngama-40.0000 [imali engenayo engama-60.000 (ama-euro angama-20.000 efulethini eliqashiwe) kancane Ama-euro angama-20.000 ngenzalo].
IJoe kaJuan isuke ku-10% yaya ku-20%.
Ukuziphatha kwesibonelo: Kubalulekile ukunaka isikweletu ukuze uhlaziye i-ROE.
Singagcina ngokuthi i-ROE
Isebenza njengethuluzi lezezimali kanye nepharamitha yokuqhathanisa kosomabhizinisi nabatshalizimali, umnotho wabo obonakala ngokuya ngenani le- ROE ukuthi laba, ngokwandisa leli nani, amathuba enkampani okugqama emakethe yomhlaba nawo ayanda, ngoba bazibeka njengenkampani ethembekile, lapho izimali zabatshali zimali zingaba khona ikhululekile futhi iphephile, ne ingozi ephansi.
El encane Ubungozi yilokho abatshalizimali abahlale befuna, ngakho-ke ROE ukhulumela izinkampani, hhayi ukukhangisa noma ukuthengisa, uma kungenjalo ukuqagela kwezinkampani esikhathini esizayo, lapho izibikezelo zihamba phambili emnothweni, uma ungazami ukubikezela okuzokwenzeka emakethe, uzobuyela emuva bonke abanye abatshalizimali nezinkampani ezibuyekeziwe.
Kuyasiza futhi ngokumangazayo ekukhuthazeni inani lentengo yenkampani, uma ngabe I-ROE yenkampani iyanda, futhi inyusa ngokulingana inani lokuhweba lamasheya ayo.
Akungabazeki ukuthi ingenye yemingcele esebenza kakhulu yokwazi okusetshenziswayo onakho ngokususelwa kutshalo-mali lwakho, kanye nokuqhathanisa izimo zenkampani eyodwa nenye, noma ukwenza isithombe esihle nokuzethemba ukuze uhehe abatshalizimali, Manje njengoba ' ngifunde ukusetshenziswa kwe-ROE, uwasebenzise ngokunenzuzo ukusetha inkambo yebhizinisi lakho noma ilungelo lokutshala imali.
Indlela ephelele ye-athikili: Ezezimali Zomnotho » Ipolitiki yezomnotho » Ipolitiki yezimali » Yini i-ROE?
Iberdrola: inkampani kagesi ekhethwa ngabahlaziyi